ညတုန်းကကြည့်တဲ့မှန်	Posted by oakkarkoko on December 26, 2010
← အလင်းပျောက်ည	တို့သူငယ်ချင်းများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ…. →	One comment on “ညတုန်းကကြည့်တဲ့မှန်”
ဟိုင်း ………. ဒီးယား ….ခေတ်ပေါ် ကဗျာ ဆရာဂျီး … မောင်ကိုကို ဆက်မဖတ်ရုံ လို့ ပြောလို့မရအောင်…အောက်က မဖတ်ရသေးတာတွေ အကုန်ဖတ်နေပါသည်…။ ကဗျာဟောင်းလေးတွေကိုလည်း ခံစားပေးသွားပါသည်… နားမလည်တာကိုလည်း (သိပ်အဆင့်မြင့်တဲ့ ပန်းချီများလို )နားမလည်လည်အောင် အတင်းအဓမ္မ ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် ကြံဖန် ထိမိအောင် ခံစားသွား ပါသည်…။ ချက်ချင်း မရောက်တာကိုလည်း အပစ်တော်မယူစေချင်ပါပဲ… ယဉ်ကျေးစွာ ချိတ်ဆိုးပါနဲ့ဟု မောင်ကိုကို သံတွဲအား မကြီးပန်းဗေဒါမှ တောင်းပန်ပါသည်ရှင်… ။ အစ္စလာမ် အယူအဆများကိုလည်း နဲနဲပဲ မြည်းစမ်းရပါသေးတယ်.. ။ သေချာ ပြန်ဖတ်မှရမယ်..။ စိတ်ဝင်စားစရာ မတူတဲ့ အယူဝါဒတွေ တွေ့ရမယ်လို့ ယုံမှတ်ပါတယ်..။ ဓူဝံကြယ်လေးနှင့်လည်း ဗိုလ်နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ကြပါစေလို့ တော်သေးပြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး… ဝန်ရိုးစွန်းမှ အမကြီးဗေဒါ ..